Dowladda Talyaaniga oo go’aan ka soo saaraty xilliga ay kooxaha Serie A billaabayaan tababarka – Gool FM
(Roma) 03 Maaajo 2020. Dowladda dalka Talyaaniga ayaa nalka cagaaran u shidday kooxaha ka ciyaara horyaalka Serie A iyadoo u ogolaatay in albaabada xerooyinka tababarka ay furi karaan maalinta berri ee Isniinta ah kaddib markii gobollo dhowr ah bandowgii laga rogay.
Dowladda Talyaaniga ayaa doorkii hore go’aansatay inay noocyada ciyaaraha ee shaqsi-shaqsiga loo ciyaaro hor fasaxdo sida Teeniska iyo ciyaaraha la jaadka ah.
Gobollada qaar ee dalkaas ayaa durba jadwaleeyay inay xerooyinkeeda tababarka ballaqaan 4-ta bishan May oo ku beegan maalinta beri ee Isniinta, halkii la sugi lahaa 18-ka bishan, dowladda ayaana aqbashay inaysan caddaalad ahayn in goobaha qaar ay u xarirnaadaan xirnaanta goobo kale awgeed.
Ciyaartoyda kubadda cagta iyo kooxahooda ayaa ku guuleystay dooddooda la xiriirta in tababarka ay billaabaan kooxaha ku sugan goobaha xaaladdooda ay wanaagsan tahay, inkastoo xeerka kala fogaanshaha laga dhaqan gelin doono xerooyinka kooxaha, taasoo la micno ah in gaar-gaar ay tababarka u sameyn doonaan xiddigaha.
Si kastaba ha ahaatee, Majaladda La Repubblica ayaa warrineysa in ra’iisal-Wasaaraha dalka Talyaaniga ee Giuseppe Conte uu fasixi doono xilli ciyaareedka 2019-20 horyaalka Serie A maalinta Arbacada, kaddib natiijo ka soo baxday kulamadii u dambeeyay ee uu la qaatay waaxaha ay quseyso go’aankaas.
Isku soo wada duub e, dhammaan 20-ka koox ee ka ciyaara Serie A ayaa u codeeyay in la dhammeystiro xilli ciyaareedkan horyaalka dalka Talyaaniga iyadoo la raacayo talooyinka waaxaha caafimaadka ee dalkaas.